प्रमुख मदत गर्न विवाह लागि सुन्दर संस्कार र प्रतियोगिताहरु
तपाईं थाह छ, विवाह merrymaking बिना पूर्ण छ। र विवाह लागि परम्परागत प्रतियोगिताहरु कहिलेकाहीं पनि छाडा, अक्सर भन्ने प्रकारको vulgarity एक स्पर्श संग हुन। कसरी शालीनता सीमा मा एक छुट्टी मिलाउन र लाज गर्न आमाबाबुले जबरजस्ती? तपाईँलाई मद्दत गर्न प्रयास गरौं।
डरलाग्दो ध्वनि कसरी, तर ठूलो र रमाइलो प्रतियोगिता - "। टाउको दुलहा काट्नु" दुलही र दुलहा समावेश छ। पानी को एक सुराही दुलही प्रमुख देखाउँछ - यो हाम्रो "बन्चरो", हरेक गलत जवाफ दुलही टाउको गर्न दुलहा पानी खन्याउनु हुनेछ लागि हो। जोडी भीड देखि executioner चयन गर्न अनुमति दिनुहोस्। यसैबीच हामी चुपचाप नै मा पानी को एक pitcher प्रतिस्थापन, तर पानी र चकलेट बिना छन्। दुलही लागि प्रश्नहरू सकेसम्म हल्का हुनुपर्छ। तर बाद एक zakovyrka छ। दूल्हा आमाबाबुले नाम बताउन उनको सोध्नुहोस्। र त्यो जवाफ गर्दा, दुलहा क्यान्डी, shouting "खन्याउनु": "यो गलत छ, तिनीहरूले - आमा र बुबा!" रमाइलो र एक सानो डरलाग्दो!
विवाह लागि प्रतियोगिताहरूमा - एक अद्भुत कुरा। तर आवश्यक छैन जब पकड सम्पूर्ण कार्यक्रम। छुट्टी पतला गर्न, तपाईं 10-15 मिनेट अभिनेता वा जोकर आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले विवाह दृश्य प्ले हुनेछ।
के तपाईं "मरिच संग" प्रतियोगिता गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर शालीनता को रूपरेखा भित्र - एक म्याराथन संगठित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। "दूरी" यहाँ सहभागी को अनुहार छ। यो छोटो समयमा धेरै चुम्बनहरु सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। स्वाभाविक, चुम्बन को मुद्रण छलफल लिपस्टिक। को दुल्हन - जीत साँझ को मुख्य चुम्बन हुन सक्छ।
पनि यो दुलही आफु खेल्न रोचक हुनेछ। उनको आँखा बांधन र मान्छे बतान सुरु उनको चुम्बन स्वयम्सेवकको। त्यो उनको चुंबन गर्ने अनुमान पर्छ। यो उल्लेखनीय छ कि हुनेछ केवल र केवल गालामा मा उनको दुलहा चुम्बन। आफ्नो सिट मा बस्न स्वयम्सेवकको। भिडियो स्वागत छ!
विवाह लागि प्रतियोगिताहरूमा जस्तै उदाहरणका लागि, "भाँचिएको टेलिफोन" को रूपमा, पुरानो, लामो-भूल खेल पनि समावेश हुन सक्छ। "रूख - - स्याउ - स्याउ" र त्यसैले यो खेल तपाईं संघ खेल्न सक्छन् रूपमा सिद्धान्त अनुसार। अन्त परिणाम प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ। लाभ आफ्नो सिट बाट माथि रही बिना खेल्न संभावना छ। साँझ को अन्त मा यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। Negatives - धेरै पाहुनाहरूसँग विवाह लागि उपयुक्त छैन।
उल्लेखनीय जहाँ सबै अतिथिहरूको तुरुन्तै संलग्न छन् विवाह लागि ती प्रतियोगिताहरूमा। यसरी, समूहमा अतिथि को शेयर। यो सजिलो छ - एक विकल्प को रूप मा, दुलहा र दुलही छेउमा - - पुरुष र महिला भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, यो सम्भव छ वरिष्ठ र कनिष्ठ को पुस्ता मा। तिनीहरूलाई शब्द वा वाक्यांश सोध्नुहोस्। समूह दिइएको वाक्यांश मा गीतहरू भन्छन्। टोली विजय थप सम्झना। वा रोचक - यो ताली इन्कार निर्धारण गरिन्छ। ... वा यो प्रतियोगिता शीघ्र कल्पना रूपमा अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ। र, फेरि, भिडियो स्वागत छ!
माथिको सबै मात्र विवाह मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठट्टा कुनै पनि कम्पनी मा परीक्षण गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, दल लागि प्रतियोगिताहरूमा र खेल - यो मान्छे एकजुट हुनेछ कि बस कुरा हो।
एक धेरै रोचक प्रतिस्पर्धा - जिब्रो Twisters। तर हामी यो जटिल। हामी चकलेट मा हुनेछ। Blurted patter। त्यसपछि क्यान्डी अर्को। फेरि भन्नुभयो। दोहोर्याउनुहोस्। povyletalo क्यान्डी मुख हाँस्न गर्ने होइन एक जित्छ। वा अझ राम्रो छ जो कसैले आफ्नो मुखमा क्यान्डी अधिकतम संग, भन्नुभयो।
प्रतियोगिता छैनन् फोहोर प्राप्त गर्न डर गर्नेहरूलाई लागि हो। यो एक तौलिया, बेलुन र हास्य को एक राम्रो भावना र धेरै महँगो छैन वेशभूषा संग केहि जोडी आवश्यक छ। समान तिनीहरूलाई धारण मोती सीमित गर्न फुल्नु फोम शेविंग। मानिस बिस्तारै स्त्री छुरा संग shaves, तल धारण। Baaams! राम्रो जोडी जित्छ। वा एक जो कोहीले भन्दा छिटो यसलाई गरे कि।
यी र अन्य खेल र दृष्टिकोण हुनेछ कर्पोरेट घटनाहरु, दल लागि प्रतियोगिताहरूमा। तर, को पाठ्यक्रम, तिनीहरूलाई trivialize छैन। तिनीहरूले मानिसहरूलाई त सँगै काम गर्न सहज महसुस त्यस्तो हुनुपर्छ।
के नोभेम्बर 1st मा एक छुट्टी? को जन जीवन
नयाँ वर्षको रोचक र रमाइलो कहाँ मनाउन?
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या मा प्रियजनहरूलाई लागि वरदान छनौट
एक महिला वा मानिसको वार्षिकोत्सव मा हास्यास्पद प्रतियोगिताहरु
हर्मोन FLG। यो के हो?
अल्ब्रेक्ट Durer: जीवनी र काम। Albrehta Dyurera द्वारा काम गर्दछ: सूची
तिमी मेरो जीवन बर्बाद छ, तर यो स्विकार गर्न चाहँदैनन् 13 संकेत
मानव जीवन डीसी
परजीवी को लौंग: कसरी बनाउने, समीक्षा, फोटो
Roza Vetrov - यो के हो? प्रजाति उदाहरण मूल्य र इतिहास चार्ट
Feralnye मान्छे। बच्चाहरु पाला जाए जनावर: इतिहासबाट उदाहरण
रूस मा Subaltern अधिकारीहरु: शीर्षक, खिताब। को "वरिष्ठ अधिकारीहरु को बच्चाहरु" को हुन्?